नाईकेमा अभिनेता आर्यन सिग्देल संग जोडि बाधेर नेपाली सिनेमामा डेब्यु गरेकि नायिका हुन् सुरबिना कार्की । सुरबिना छोटै समयमा दर्शकमाझ चिनिएकि नायिका हुन् । तर पनि सुरबिनालाई बक्स अफिसमा सफल सिनेमा भने जुरेको छैन् । उनले अभिनय गरेको कुनै पनि सिनेमा बक्स अफिसमा सफल हुन सकेका छैनन् ।
हट फोटोसुट र म्युजिक भिडियोको अभिनयबाट सिनेमामा प्रवेश गरेकि सुरबिना बक्स अफिसमा असफल र ब्यस्त नायिकाको सुचिमा पर्छिन् । सिनेमामा असफल भएपनि सुरबिनाका लागी सिनेमाको भने कमि छैन् । सिनेमाको अफर आईरहेपनि आफुलाई स्क्रिप्ट र कथाबस्तु मन नपरेका कारण सिनेमा नगरेको बताउने सुरबिनाको हातमा सिनेमा छ वा छैन् भने कसैलाई पनि थाहा छैन् । उनि पछिल्लो समय मिडियाबाट टाढै छिन् । थुप्रै सिनेमा र म्युजकि भिडियोमा काम गरिसकेकी सुरबिना पछिल्लो समय के गदैछिन् त ?
लगातार सिनेमा असफल हुदा सुरबिनालाई करिअर बिग्रने डर एकातिर छ भने अर्कोतिर जस्तो पायो त्यस्तै सिनेमामा काम गरे अरु सिनेमा नपाउने अर्को ठुलो डर छ । एउटा पनि सिनेमा सफल नभए अहिलेको समयमा कुनै निर्माता सनर्देशकले कलाकारलाई लगानी गदैनन् । आफुमाथि लगानी होस भन्नका लागी भएपनि सुरबिनाका लागी एउटा सफल सिनेमाको खांचो छ । अब सुरबिनाको जीवनमा सफल सिनेमा दिन सक्ने निर्माता निर्देशक पो छन् कि छैनन् होला ? त्यो भने पछिनै थाहा होला । तैपनि सुरबिनाले लामो समय सिनेमाबाट ब्रेक लिग्नु पक्कै पनि उनका लागी राम्रो नहोला । दर्शकले सम्झिरहनका लागी भएपनि सुरबिनाले सिनेमामा काम गर्नु जरुरि जस्तै भईसकेको छ । सुरबिनाले अभिनय गरेका नाईके, लुकामारी जस्ता सिनेमा बक्स अफिसमा पुर्ण असफल सिनेमा मानिन्छ ।